Sida loo helo Jolteon, Vaporeon iyo Flareon gudaha Pokémon Go | Wararka IPhone
Jolteon, Vaporeon ama Flareon? Waxaan ku tusineynaa sida looga helo Pokémon Go
Subaxnimadan Sabtida waxaan rabnaa inaan kugu madadaalino turki kale Pokémon Go. Haddii aan dhawaan kuu sheegnay sida loo helo Pikachu oo ah Pokémon-ka bilawga ciyaarta, maanta waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida ugu fudud ee loo helo Jolteon, Vaporeon ama Flareon, midka aan door bidno. Mid kale oo ka mid ah casharro yaryar oo badan oo loogu talagalay Pokémon Go oo aan kuu soo qaadan doonno, maxaa yeelay, wararka ku saabsan iPhone-ka waxaan mar walba dooneynaa inaan la soconno wixii ku saabsan codsiyada macruufka, waana xilliga kuleylaha ee Pokémon. Kaalay oo waxaan kuu sheegi doonaa sida ay u fududahay in la doorto Jolteon, Vaporeon ama Flareon Pokémon Go.
Waa ku filan tahay in si sax ah wax looga beddelo magaca Evee la qabtay si loo awoodo in loo beddelo tirada la rabo ee Pokémon ee aan dooneyno. Taasi waa sax, marka hore waxaan qaban doonnaa Eevees nagu filan si aan u kobcinno (waxaan u baahan doonnaa nacnac Evee ah si loo horumariyo Pokémon). Markii aan helno wax ku filan, waxaan dooranaynaa Pokémon oo aan horumarin doonno, waana beddeli doonnaa magaca, tan waxaan u galnaa Pokémon-geena, markii aan feylkeeda fureyna qalin ayaa ka soo muuqan doona magaca agtiisa, waa inaan riixnaa waa Waxaan kuu sheegeynaa waa maxay magacyada ay tahay inaad u bixisid iyadoo kuxiran horumarka aan rabno:
Adiguna waxaad oran doontaa sababta? Hagaag, sida wanaagsan ee Pokémon devotee, magacyadan waa inay u egyihiin adiga. Manga iyo taxanaha, waxaan ka helnaa saddex walaalo ah oo mataano ah oo leh isbadallada kala duwan ee Evee, magacyadooda ... ma noqon karaan wax aan ka ahayn Sparky, Pyro iyo Rainer. Sidaa darteed, haddii aan u beddelno magaca Evee magacyada la cayimay, waxaan ka heli doonnaa isbeddelka aan ka dooneyno. Ma fududaan karin, oo sidii munaasabadda kaleba, waanu mahadsan nahay Ciyaaraha Luzu, Kanaalka ciyaarta fiidiyowga ee Luzu, YouTube Isbaanish ah, oo noo sharraxay sheekadan cajiibka ah. Hada, ugaarsiga Eevees berri waa daahay ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Jolteon, Vaporeon ama Flareon? Waxaan ku tusineynaa sida looga helo Pokémon Go
Ma aadan soo hadal qaadin in magaca oo la beddelo lagana qasbo isbeddel gaar ah inay 100% keliya ammaan tahay marka ugu horreysa ee aad ku qasabto isbeddelkaas, laga bilaabo markaa haddii geedi socodku soo noqnoqdo, natiijada ayaa gebi ahaanba baaluq ah
Soo bandhigida iPhone 7 ayaa dhici doonta todobaadka Sebtember 12
Pokémon Go sidoo kale waa midka koowaad ee dakhliga